Navoaka Eoan Ermine | ny kinova vaovao an'ny Ubuntu 19.10 Avy amin'ny Linux
Rehefa afaka herinandro maromaro ny fampandrosoana, Ireo tovolahy ao amin'ny Canonical dia namoaka ny kinova Ubuntu 19.10 "Eoan Ermine" androany, izay efa azon'ny besinimaro atrehana. Ity kinova vaovao amin'ny fizarana ity tonga miaraka amin'ny vaovao isan-karazany anisan'izany ireo kinova vaovao amin'ireo singa samihafa amin'ny rafitra (birao, kernel ary fonosana) miavaka.
Ho fanampin'ny fanampiana zava-baovao sy tohana fanandramana izay hosedraina amin'ity kinova famindra ity amin'ny kinova LTS manaraka an'ny Ubuntu.
1 Vaovao lehibe an'ny Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
1.2 Fanohanana fanandramana ZFS
2 Sintomy ary mahazoa Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
Vaovao lehibe an'ny Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny Ubuntu 19.10 ity amin'ireo zava-baovao miavakan, afaka mahita isika fa ny tontolon'ny birao Gnome dia nohavaozina amin'ny kinova 3.34 miaraka amin'ny fanohanan'ny fikolokoloana fampiharana kisary amin'ny maody topy maso, configurator fifandraisana tsy misy tariby nohatsaraina, birao fifantina birao sy tontolon'ny asa vaovao hampitomboana ny fandraisan'ny mpizara azy ary mampihena ny enta-mavesatra ao amin'ny CPU.
Raha tokony ho ilay lohahevitra naroso teo aloha miaraka amin'ny lohateny maizina, ny lohahevitra maivana dia ampiasaina amin'ny toerana misy anao, akaikin'ny fijery sy fahatsapana Gnome mahazatra. Ho safidy iray, soso-kevitra maizina tanteraka no atolotra, izay ampiasain'ny mpiorina maizina ao anaty varavarankely.
ihany koa nanampy ny fahazoana miditra amin'ireo kapila USB azo esorina mifandray mivantana amin'ilay tontonana. Ho an'ny kapila mifampitohy, izao dia mampiseho ireo kisary mifanitsy aminy ny tontonana izay ahafahanao manokatra ny atiny ao amin'ny mpitantana ny rakitra na manala ny kapila mba hanalana ny fitaovana.
Ary koa ao amin'ity kinova vaovao ity dia alefa amin'ny alàlan'ny default, ny fahaizana mandrindra ny fidirana amin'ireo angona multimedia amin'ny alàlan'ny protokolota iray. Ohatra, ny mpampiasa dia afaka mizara fanangonana horonan-tsary hijerena amin'ny SmartTV.
Ao anatin'ny tontolo iainana any Wayland dia azo atao ny mampihatra fampiharana X11 miaraka amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fifehezana an'i Xwayland.
Ho an'ny fon'ny rafitra, ao amin'ny Ubuntu 19.10 ny kernel Linux dia novaina ho amin'ny kinova 5.3. Mba hamoretana ny kernel Linux sy ny initramf sary boot voalohany dia ampiasaina ny algorithm LZ4, izay hampihena ny fotoana boot noho ny famotehana haingana kokoa ny angona.
Ary koa, Toolkit nohavaozina amin'ny glibc 2.30, GCC 9.2, OpenJDK 11, rustc 1.37, Python 3.7.5, ruby ​​2.5.5, php 7.3.8, perl 5.28.1, mankanesa any amin'ny 1.12.10. Kitapo nampiana miaraka amin'ny MySQL 8.0.
Ny biraon'ny birao LibreOffice dia nohavaozina ho 6.3, PulseAudio Sound Server dia nohavaozina amin'ny kinova 13.0, QEMU 4.0 nohavaozina, libvirt 5.6, dpdk 18.11.2, Open vSwitch 2.12, cloud-init 19.2, miampy koa Manampy amin'izany ny fanohanana fanampiny ho an'ny teknolojia fiarovana tsy misy tariby WPA3.
Fanohanana fanandramana ZFS
Raha ny ampahany amin'ny fanandramana, Ny Ubuntu 19.10 dia manasongadina ny fanampiana ny fanandramana fanandramana hametrahana ny fisarahana amin'ny ZFS. Nanampy fanohanana amin'ny famoronana sy fizarazarana amin'ny ZFS ao amin'ny installer.
Drafitra zsys daemon vaovao novolavolaina hitantanana ZFS, izay ahafahanao mihazakazaka rafitra mifanindran-dàlana maro miaraka amin'ny ZFS amin'ny solosaina iray, manamboatra ny famoronana snapshot ary mifehy ny fisarahana ny angon-drakitra sy angon-drakitra izay novaina nandritra ny fotoanan'ny mpampiasa.
Ny hevi-dehibe dia ny amin'ny fakantsary samihafa dia mety misy fari-pahalalana samihafa ao amin'ilay rafitra ary mifamadika eo anelanelany. Ohatra, raha sendra olana aorian'ny fametrahana ny fanavaozana dia azo atao ny miverina amin'ny toetr'andro efa niorina tamin'ny alàlan'ny fisafidianana ilay sary nalaina teo aloha. Azo ampiasaina ihany koa ny snapshots hamerenanao ho azy ny data momba ny mpampiasa.
Sintomy ary mahazoa Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
Ary farany, ho an'ireo izay te-hisintona sy hametraka an'ity kinova Ubuntu vaovao ity amin'ny solo-sain'izy ireo na hahafahana mitsapa azy amin'ny milina virtoaly, Tokony hampidina ny sarin'ny rafitra avy amin'ny tranonkala ofisialin'ilay rafitra izy ireo.
Azo atao izany avy amin'ny ity rohy manaraka ity. Zava-dehibe koa ny milaza an'izany ny sarin'i Server Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, ary UbuntuKylin (fanontana sinoa).
Ary koa sary ho an'ny tabilao Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 2, Pi 3B, Pi 3B +, CM3 ary CM3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Navoaka sahady ny kinova vaovao an'ny Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
Manomeza voninahitra dia hoy izy:
Salama, ao amin'ny ubuntu 19.10 ny komandy sudo aptitude hametraka seahorse-plugins dia tsy mandeha, milaza amiko ny terminal fa tsy misy ilay fonosana, na efa lany andro (izay heveriko), na hoe ity fonosana ity dia amin'ny loharano hafa. Manome safidy roa hafa aho saingy tsy nisy azoko natao ny nametaka ny encryption sy decryption tao amin'ny nautilus.
Inona no azo atao amin'ity tranga ity ??
Mamaly an'i honorio
Google Stadia dia efa manana daty fanombohana, 19 Novambra